Tababarka Devops ee Guriga DevOps Certification ee Gurgaon - ITS
Caqli ahaan |Madaxa Asaasiga ah |Docker |Aasaaska aasaasiga ah
Waa maxay sababta ITS?
Solutions Technologies Innovative (ITS) waa hoggaamiye caalami ah oo bixiya tababarka IT iyo xirfadaha xirfadaha xirfadeed ee shirkado badan oo waawayn iyo kuwo yaryar oo dunida oo dhan ah. Ujeedada ugu muhiimsan ee shirkadu waa in ay siiso ugu habboon barnaamijyada tababarka rasmiga ah ee warshadaha ay bixiyaan qaar ka mid ah tababarayaasha ugu fiican ee Sayniska. ITS ayaa door bideysa iibiyaha MNC sida HP, EMC, HCL, Kronos, Colt, Nagarro iyo waxyaabo kale oo badan oo loogu talagalay tababbarka iyo diyaarinta kaabayaasha baahida tababarka ee gobolka APAC / APJ. ITS waxaa caan ku ah in la qabsado hababka cusub ee tababarka iyo tababareyaasheenu waxay had iyo jeer diiradda saaraan bixinta tababarka tayada leh. ITS waxaa loo yaqaanaa in ay noqoto shirkadda tababarka ugu dabacsan ee habeynta habka tababarka oo waligeedba diyaar u ah in ay tababar ku bixiyaan meel kasta oo adduunka ah.
Baro Wakhti kasta
Isticmaal ITS Website si aad u dhameysato koorsadaada waqti kasta oo aad jeceshahay
Horumarinta loo-shaqeeyayaasha khibrada leh ayaa raadinaya. Helitaanka koorsooyinka 1500 lacag la'aan.
Tababar Tigreega leh
Soo qaado xirfadaha aad u baahan tahay si aad u qabsatid, geeddi-socodka, iyo falanqaynta xogta aduunka taariikhda-xog-raadinta.
Tiknoolijiyada cusub ee teknoolajiyada oo u hogaansamaya hogaaminta caalamiga ah ee IT iyo Tababarka Xirfadaha Xirfadaha Shaqada iyo shirkad bixiye xal. ITS-ga oo la kaashanaya shirkadaha horumarinta Software iyo Hardware oo bixiya tababbar iyo xalal shirkado badan oo waawayn iyo kuwo yaryar oo ku baahsan Caalamka. ITS ayaa doorbidaya iibiyaha MNC sida HP, EMC iyo waxyaabo kale oo badan oo loogu talagalay bixinta Qalabka Tababarka iyo diyaarinta kaabayaasha baahida tababarka ee gobolka APAC / APJ. ITS waxaa caan ku ah in la kobciyo habka cusub ee tababarka iyo had iyo jeer la cusbooneysiiyo maadooyinka ku haboon ee keenista bixiyeyaasha wanaagsan. ITS waxaa loo yaqaanaa in ay tahay mid aad u jilicsan in la qaabeeyo habka tababarka iyo diyaar u ah in ay tababar ku siiyaan aag kasta.
Su'aalo? Ka hel Touch
BaroKoorsada Devopsee Gurguurta. Diiwaan galiTababarka Devops ee Gurigagudahashirkadda tababarka sare"Solutions Technologies Innovative" oo helShahaadada DevOps. Ka hel faahfaahin ku saabsan khidmadaha kooraska, manhajka, mudada, wakhtiyada ballaadhan.
Wax badan ka baro oo hesho shahaadada:
Waxaad maqashay dhammaan qiimaha tababarka Devops.Xiraan farqiga xirfadaha IT-ga sida aad u baraneyso ugu fiican iyo Baro sida aad u gaar ah, meeshaada.
Wixi Weydii Halkan Click
Baro Koorsada Devops ee Gurguurta. Diiwaan galiTababarka Devops ee Guriga in shirkadda tababarka sare "Solutions Technologies Innovative" oo hel Shahaadada DevOps. Ka hel faahfaahin ku saabsan khidmadaha kooraska, manhajka, mudada, wakhtiyada ballaadhan.
Liisaska Shahaadooyinka Shahaadada DevOps
1 Caqli ahaan View More
2 Madaxa Asaasiga ah
3 Docker View More
4 Aasaaska aasaasiga ah View More